Bitcoin Planet စျေး - အွန်လိုင်း BTPL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitcoin Planet (BTPL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitcoin Planet (BTPL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitcoin Planet ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BTPL – Bitcoin Planet
Market ကဦးထုပ်: $578.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitcoin Planet တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitcoin Planet များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Bitcoin PlanetBTPL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0092Bitcoin PlanetBTPL သို့ ယူရိုEUR€0.0078Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00704Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00838Bitcoin PlanetBTPL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.082Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0581Bitcoin PlanetBTPL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.204Bitcoin PlanetBTPL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0343Bitcoin PlanetBTPL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0122Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0129Bitcoin PlanetBTPL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.204Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0713Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0494Bitcoin PlanetBTPL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.689Bitcoin PlanetBTPL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.55Bitcoin PlanetBTPL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0126Bitcoin PlanetBTPL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0141Bitcoin PlanetBTPL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.286Bitcoin PlanetBTPL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0639Bitcoin PlanetBTPL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.982Bitcoin PlanetBTPL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.9Bitcoin PlanetBTPL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.57Bitcoin PlanetBTPL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.674Bitcoin PlanetBTPL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.253
Bitcoin PlanetBTPL သို့ BitcoinBTC0.0000008 Bitcoin PlanetBTPL သို့ EthereumETH0.00002 Bitcoin PlanetBTPL သို့ LitecoinLTC0.000169 Bitcoin PlanetBTPL သို့ DigitalCashDASH0.000101 Bitcoin PlanetBTPL သို့ MoneroXMR0.000103 Bitcoin PlanetBTPL သို့ NxtNXT0.718 Bitcoin PlanetBTPL သို့ Ethereum ClassicETC0.00136 Bitcoin PlanetBTPL သို့ DogecoinDOGE2.66 Bitcoin PlanetBTPL သို့ ZCashZEC0.000112 Bitcoin PlanetBTPL သို့ BitsharesBTS0.284 Bitcoin PlanetBTPL သို့ DigiByteDGB0.294 Bitcoin PlanetBTPL သို့ RippleXRP0.0327 Bitcoin PlanetBTPL သို့ BitcoinDarkBTCD0.000317 Bitcoin PlanetBTPL သို့ PeerCoinPPC0.0305 Bitcoin PlanetBTPL သို့ CraigsCoinCRAIG4.19 Bitcoin PlanetBTPL သို့ BitstakeXBS0.392 Bitcoin PlanetBTPL သို့ PayCoinXPY0.161 Bitcoin PlanetBTPL သို့ ProsperCoinPRC1.15 Bitcoin PlanetBTPL သို့ YbCoinYBC0.000005 Bitcoin PlanetBTPL သို့ DarkKushDANK2.95 Bitcoin PlanetBTPL သို့ GiveCoinGIVE19.93 Bitcoin PlanetBTPL သို့ KoboCoinKOBO2.1 Bitcoin PlanetBTPL သို့ DarkTokenDT0.00848 Bitcoin PlanetBTPL သို့ CETUS CoinCETI26.58
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 08:50:02 +0000.